मे दिवस र सांस्कृतिक ठगी
डा. गाेपाल ठाकुर बिहीबार, वैशाख १९, २०७६ मा प्रकाशित
हिजो विश्वभरिका श्रमिकहरूले १३०औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसलाई मे दिवसको रूपमा हर्षोल्लासका साथ मनाएका छन् । नेपालमा पनि विभिन्न संघ-संगठनहरूले विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजन गरी हिजो मे दिवस सम्पन्न गरेका छन् । आजभन्दा १२९ वर्ष अघि अमेरिकाको सिकाकोमा लामो संघर्ष पछि मजदूरहरूले ८ घंटा काम, ८ घंटा आराम र ८ घंटा मनोरंजनको श्रम तालिकामा मालिक र उनीहरूको सरकारलाई हस्ताक्षर गराउन घुँडा टेकाएका थिए । त्यसैको सम्झनामा हरेक वर्ष मे १ तारिखलाई मे दिवसको रूपमा विश्वभरिका श्रमिकहरूले मनाउने परम्परा बसेको हो । यो दिवस मनाउनुको तात्पर्य हो श्रम र श्रमिकहरूलाई घृणाको सट्टा सम्मान गर्न र गराउन उत्प्रेरित गर्नु र उस्तै परे बाध्य पार्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिनु ।
यस अवसरमा बारा र पर्साका अखिल नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ र नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ सम्बद्ध मजदूरहरूद्वारा जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाको वडा नं २ को प्रांगणमा आयोजित मे दिवसको भव्य र सभ्य कार्यक्रममा म पनि सहभागी भएको थिएँ । कार्यक्रम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी समिति सदस्य एवं नेपाल सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका प्रसाद यादवको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भयो ।
मजदूर नेताहरूको तर्फबाट वर्तमान अवस्थामा मालिक र मजदूरको बीचको अवस्थालाई विभिन्न किसिमले चित्रित गरिएको थियो । तिनको संश्लेषणले पूरै समारोहलाई नेकपाको दुई तिहाईको सरकार हुँदा पनि मालिक र मजदूरहरूले पालन गर्नै पर्ने भनी बनाइएका ऐन, कानून र आचार संहिताहरूको मालिक तप्काबाट घीनलाग्दो तवरबाटै उल्लंघन भएको प्रमाणिक तथ्यमाथि गम्भीर बनाएको थियो । तर नेकपाको संघीय सरकार भएकोले मजदूरहरू झन दोधारमा देखिएको पनि भान हुन्थ्यो । सडकमा आउँदा आफ्नै आस्थाको सरकारलाई अपमान गरेको ठहरिने र त्यसो नगर्दा आफ्नो दारुण अवस्था यथास्थितिमै रहने कंकर्तव्यविमूढको अवस्था रहेको प्रष्टै थियो ।
तर मजदूर नेता सोनालाल साह र पार्टी केन्द्रीय सदस्यद्वय बलवीर चौधरी र ज्वाला साहले अवस्थामा परिवर्तन नआए संघर्षमा जान कसैले नरोक्‍ने उद्घोष पनि गरे । संघीय मन्त्री मातृका यादवले उपलब्धीका लागि संघर्षलाई अवश्यंभावी बताउँदै परिस्थिति अनुसार संघर्षको रूपमा परिवर्तन हुन सक्‍ने संभावना व्यक्त गरे । उनले आफ्नै अनुभव पनि साटासाट गर्दै बदमाश उद्योगीहरूलाई सरकारले थुन्न थाले पछि अधिकाधिक चिनी उद्योगले उखू किसानहरूको बक्यौता चुक्ता गरेको प्रसंग पनि प्रस्तुत गरे ।
प्रवीण ब्लोनको सांगीतिक प्रस्तुतिले पनि युवा तथा मजदूरहरूलाई नयाँ नेपाल निर्माणको लागि संघर्षै रोज्न अभिप्रेरित गर्‍यो । खास गरी उनले मजदूरहरूले गुमाउनु पर्दा दास्ता र जित्दा संसारकै संचालन गर्ने अवसर पाउने सन्देश दिए । म स्वयं पनि संस्कृतिकर्मी भएकोले आफ्नो मंचीय प्रस्तुतिमा एउटा गीत पनि प्रस्तुत गरें ।
कहिआ ले उल्टा पढ़इबऽ ए भाई मेहनत के मजाक उड़इबऽ
कुमार-गणेश के गढ़लऽ कहानी
कुमार का साथे भइल बेइमानी
दुनिया के खोज मे अबले कुमार बा
निकम्मा गणेश के नाम बेसुमार बा
कबले तू ओकरे के पुजबऽ पूजवइबऽ मेहनत के मजाक उड़इबऽ
मेहनती बा जे ओके नीच बनइलऽ
दलित अछोप शूद्र कहलऽ कहवइलऽ
पढ़ाई के मेहनत से नाता तोड़वइलऽ
बैठल जे खाए ओके बड़का बनइलऽ
कामचोर कब ले तू बड़का कहइबऽ मेहनत के मजाक उड़इबऽ
श्रमजीवी के नावें कामचोरवा मोटात बा
मेहनत से दूर ओकर बड़की औकात बा
बदलल बा चेतना के नयका जमाना
ना चली इहाँ अब तोर कौनो बहाना
आजु मई दिवस पर इहे आह्वान बा
मेहनत ही दुनिया में सब से महान बा
मेहनत मेहनती के कदर करइबऽ तबे तू निमन कहइबऽ
यो गीत युवा कमरेड देवशरण साहले फेसबुक स्टाटसमा हालेको पाएँ । त्यसमा एकजना मित्रलाई गणेश प्रवृत्तिलाई मैले उदांगो पारेको मन परेन छ । उनले बुवाआमालाई कहिल्यै अपहेलित नगर्ने अर्ती-उपदेशले भरिएको टिप्पणी लेखेको पाएँ । टिप्पणी मननयोग्य नै छ ।
त्यसैले यस पूर्वीय जनजीवनमा भएको सांस्कृतिक ठगीको बारेमा मैले बोल्नै पर्ने भएको छ । आमाबाबु मात्रै होइनन्, जो कोही अग्रजलाई पनि ठेस पुर्‍याउनु हुन्न भन्ने मान्यता प्रति म सचेत छु । तर पौराणिक प्रसंगमा आएको कुनै अशोभनीय घटनालाई अमृतको जलप लगाई विषपान गराउने संस्कृतिको पक्षपाती हुन सकिँदैन । किनभने पौराणिक प्रसंगहरूमै पनि त्यस्तो क्रमभंग भएका मनग्य उदाहरणहरू भेटिन्छन् ।
मेरो मातृभाषा भोजपुरीमा भन्ने गरिन्छः पिता पतीतो भला ।
यानी जस्तै पतीत भए पनि पिता पूजनीय नै हुन् । तर प्रहलादले हिरण्यकशिपुलाई किन मानेनन् ? पितालाई नमानेको अपराधी प्रहलाद कसरी भक्तशिरोमणि भए ? यसरी पितृवैरी विष्णुको शरणमा जाने प्रहलादलाई कसले गलत भनेका छन् ? यदि पितृभक्तिको कोणबाट कुरा गर्ने हो भने प्रहलाद त महापतीत हुन आउँछन् । तर हाम्रो समाजले हिरण्यकशिपुलाई एकहोरो रूपमा गाली गर्ने र प्रहलादको नाममा आजसम्म ताली पड्काइरहेको छ । यस प्रसंगमा हामीले गहिरिएर सोच्‍ने कि नसोच्‍ने ?
संस्कृतमा भन्ने गरिएको छः पुत्र कुपुत्र भवति किंतु माता कुमाता नभवति ।
अर्थात छोरा बिग्रिन सक्छ तर आमा बिग्रेको शंका पनि गर्नु हुन्न । तर आफ्नो मृत्यु अवश्यंभावी भएको थाहा पाएर पनि कर्णले दुर्योधनको शिविर त्यागेर युधिष्ठिरको शिवरमा जान किन मानेनन् ? उनकी आमाको एक पटकको मौनताले के परिणाम ल्यायो ? यति हुँदाहुँदै पनि कर्णलाई अनेक छलप्रपंचले मारिएको प्रसंग प्रति हाम्रो समाजले किन आँखा चिम्लेको छ ? अब पनि कर्णलाई न्याय दिन किन तत्पर हुँदैन ?
यति मात्रै होइन । यसै समाजले पितृभक्त मेघनादको किन प्रशंसा गर्दैन ? शायद उनले रावणको अवज्ञा गरेको भए लंकाको राजा पनि हुन पाउँथे । तर उनले त्यसो नगरी पिताकै पक्षमा युद्ध गरे तर हाम्रो समाजले उनलाई गाली मात्रै गर्छ । परशुरामले पिताको आदेशमा आमाकै हत्या गरेका थिए । के त्यसो गर्न हाम्रो समकालीन समाजले अनुमती दिन्छ ? यदि दिँदैन भने परशुराम पनि हाम्रो समाजमा एउटा आदर्शको रूपमा किन स्थापित छन् त ?
रह्यो कुरो शिव-पार्वती र कुमार-गणेशको, त यसमा पनि कुमार नै जेठा थिए । तीक्ष्णबुद्धि नै थिए । तर परीक्षामा चीट चोरेर पास गर्न जानेनन्, मानेनन् । उनको गलती यति मात्रै हो । होइन भने शिव-पार्वतीको उनले के, कसरी, कहाँ, कुन खालको अपमान गरेका थिए त ? हाम्रो समकालीन समाज र कुनै पनि सनातनी विद्वानले बताउन हिम्मत गर्नु पर्‍यो । त्यसैले गणेश आफ्ना मातापिताका भक्त थिए र कुमार मातापिताका द्रोही थिए भन्थान्नु नै अलपज्ञता ठहरिन्छ । तर यस पौराणिक प्रसंगमा शिवपार्वती अवश्य नै चुकेका हुन् वा श्रमको अपमान गरेका हुन् र यी दुवै अवस्थामा हाम्रो समाजमा तिनको स्थान श्रमविरोधीकै रूपमा हुनु पर्छ । खास गरी श्रमिकहरूले यदि शिव-पार्वती र गणेशलाई नै पूजा गर्न चाहन्छन् भने किन मे दिवस मनाउने ? किन हामी राजतन्त्रको सट्टा गणतन्त्र रोज्यौं त ?
यसमा मेरो भनाइ यति मात्रै छ, पौराणिक वा आधुनिक कुनै पनि प्रसंगमा श्रमविरोधी आचरणलाई यदि प्रोत्साहन हुन्छ भने त्यस्ता प्रसंगलाई हामीले खारेज गर्न सक्‍ने र त्यस्तो पात्र-प्रवृत्तिलाई नंग्याउनै पर्ने हुन्छ । होइन भने पार्टी, संगठन र नेतृत्वबाट बेला बेलामा हुँदै गरेको नातावाद, कृपावादको प्रदर्शनको विरोध गर्नुको कुनै अर्थ छैन । विश्वास अध्यात्म हो भने स्थलगत निरीक्षण, परीक्षण र प्रयोग भौतिकता । हाम्रो समृद्धि भौतिकताले दिन्छ, भौतिकवादले दिन्छ र भौतिक रूपमा सम्पन्न अध्यात्मवादीहरू पनि केवल आत्मज्ञान र आध्यात्मवादकै अनुयायी भएर अगाडि आएका छैनन् । बरू अध्यात्मलाई उनीहरूले निरिह आम जनमानसलाई जन्मभन्दा अघि र मृत्युभन्दा पछिका असीम रूपमा समृद्ध स्वर्गसुखको प्रलोभनमा जन्मदेखि मृत्युपर्यन्त लुट्ने साधन बनाएका हुन् । त्यसैले पौराणिक प्रसंगहरूलाई पनि श्रमजीवीहरूको पक्षमा उपयोग गर्दै अघि बढ्नको लागि समयानुकूल शल्यक्रिया आवश्यक छ ।